उही म:म - परिहास - नेपाल
घरी चुनाव होला–होलाजस्तो, घरी नहोला–नहोलाजस्तो हुँदाहुँदै अब किस्ता–किस्तामा होला–होलाजस्तो भा’छ । रंगीचंगी पार्टीका बहुरंगी उम्मेदवारका अभिनयकलाले भरिभराउ छ, (अ)सामाजिक सञ्जाल । नयाँ जोगीले धेरै खरानी घस्छ भन्याजस्तो सबभन्दा पहिला नयाँ पार्टीकै उम्मेदवार खडा छन् बजारमा । उता उनीहरु चुनाव चिह्न पाइनँ भन्छन् तर यता सबभन्दा पहिला चुनाव उनैलाई लाग्या छ ।
२० वर्षअघिको पछिल्लो स्थानीय चुनाव हुँदा आमाको काखमा लपेटिएर दूध चुसिरहेकीदेखि सेन्चुरी हानेकासम्मको चुरीफुरी छ यहाँ । नयाँ खुलेका कति शक्तिले मतदाता त टाढाको कुरा उम्मेदवारै पाइरहेका छैनन् । अब फेसबुक/ट्वीटरमा धेरै ‘फ्यान फलोअर्स’ भएका छान्ने कि दिनमा कम्तीमा पाँच–पाँचओटा स्ट्याटस र ट्वीट पोस्ट गर्न सक्ने छान्ने ? गायनमा कोमल वली वा अभिनयमा रेखा थापा वा सोसरह छान्ने कि निर्माण व्यवसायी वा म्यानपावर व्यवसायी वा शिक्षा व्यवसायी ? आफू माखो नमार्ने वा सिन्को नभाँच्ने तर खोट मात्रै देखाउने छान्ने कि नोट देखाउने छान्ने ? कि यो भेराइटीयुक्त भरिभराउ मेन्यु हेरीकन लास्टाँ उही म:म अर्डर गर्ने हो ?